ရာသီကုန်တွင် ချဲလ်ဆီး အသင်း အထက်မှာ အာဆင်နယ် အသင်း ဘာကြောင့် ရပ်တည် နိုင်မှာလဲ ဆိုတာ ရှင်းပြလိုက်တဲ့ ပီတစ် - xyznews.co
ရာသီကုန်တွင် ချဲလ်ဆီး အသင်း အထက်မှာ အာဆင်နယ် အသင်း ဘာကြောင့် ရပ်တည် နိုင်မှာလဲ ဆိုတာ ရှင်းပြလိုက်တဲ့ ပီတစ်
ပီတစ် က ဂန်းနား တို့ လက်တစ်​လော ပုံစံကောင်း ပြသနေမှု ၊ ချဲလ်ဆီး အသင်း ရလဒ်ပိုင်း ကျဆင်း နေမှု တို့ကြောင့် အာဆင်နယ် အသင်းဟာ ချဲလ်ဆီး အသင်း အထက်မှာ ရပ်တည် နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း ပြောကြား လိုက်ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် အသင်း ဟာ ရာသီ အစမှာ သုံးပွဲဆက် ဂိုးမသွင်း နိုင်ဘဲ ရှုံးနိမ့် ခဲ့တာကြောင့် နည်းပြ အာတီတာ တစ်ယောက် သူ့ရဲ့ရာထူး ဆက်လက် တည်မြဲဖို့ ကြိုးစား အားထုတ် ခဲ့ရပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အာဆင်နယ် အသင်းဟာ လူငယ် ကစားသမားတွေ ၊ ကစားသမားသစ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေ နဲ့ အတူ ရလဒ်ကောင်းတွေ ပြန်ရလာခဲ့ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် အသင်းဟာ ဒီဇင်ဘာလ အတွင်းမှာတော့ ၅ ပွဲဆက်တိုက် နိုင်ပွဲ ရယူပြီး အမှတ်ပေး ဇယား အဆင့် ၅ နေရာ(အဆင့် ၄ က ဝက်စ်ဟမ်း ထက် တစ်ပွဲလျော့) အထိ တက်လှမ်း နိုင်ခဲ့ကာ အဆင့် ၂ နေရာက ချဲလ်ဆီး အသင်း နဲ့ ရမှတ် ၈ မှတ် အကွာမှာ ရှိနေပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး အသင်းကတော့ အောက်တိုဘာလတုန်းက အမှတ်ပေးဇယား ထိပ်ဆုံး မှာ ရပ်တည် နိုင်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ၅ ပွဲမှာ ၄ ပွဲ သရေကျပြီးနောက် ထိပ်ဆုံး က မန်စီးတီး နဲ့ ရမှတ် ၁၀ မှတ် အထိ ကွာဟ သွားခဲ့ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် အသင်း နဲ့ အတူ ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံဆု ရခဲ့ဖူးတဲ့ ပီတစ် က bookmakers . com မှာ ” အာဆင်နယ် အသင်း ထိပ်ဆုံး လေးသင်းထဲ ဝင်နိုင်သလား ? ဒီမေးခွန်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်လကသာ မေးရင် အာဆင်နယ် အသင်း ထိပ်ဆုံး လေးသင်းထဲ ဝင်ဖို့က အံ့ဩဖွယ် ဖြစ်ရပ်တွေ ဖြစ်လာမှလို့ပဲ ဖြေမိမှာပါ ။ ”
” ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့လတွေ အတွင်း အာဆင်နယ် အသင်း လုပ်ပြ ခဲ့တာတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့မှာ အခွင့်အရေးကောင်း ရှိနေတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ် ။ သူတို့ရဲ့ ရာသီအစက အတော်လေး ဆိုးရွားခဲ့ပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် ခြောက်လ အကြာမှာတော့ ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့်ရနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး ရှိနေပါပြီ ။ ”
” အခု အချိန်မှာ အားလုံးက စိတ်ပြောင်းသွားကြပါပြီ ၊ ယုံကြည်မှုတွေလည်း ပြန်ရလာကြပါပြီ ၊ အာဆင်နယ် အသင်း ဒဏ်ရာ ပြဿနာတွေ မများလာဖို့ပဲ ကျွန်တော် မျှော်လင့်ပါတယ် ၊ ဒဏ်ရာ ပြဿနာက အာဆင်နယ် အတွက် ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာ တစ်ရပ် ဖြစ်လာ နိုင်ပါတယ် ။ ”
” ချဲလ်ဆီး အသင်း လက်တစ်လော ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကြောင့် သူတို့ အမှတ်တွေ ထပ်လျှော့ဖို့ မျှော်လင့်လို့ ရနိုင်ပါတယ် ။
ဒီလိုသာ ဖြစ်လာခဲ့ရင် အာဆင်နယ် အသင်း အနေနဲ့ အဆင့် ၃ နေရာကိုပါ ပစ်မှတ် ထားနိုင်ပါပြီ ၊ အာဆင်နယ် ကစားသမားတွေ အတွက် အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရှိနေပါတယ် ၊ သူတို့ အမိအရ ရယူနိုင်ဖို့ လိုပါတယ် ။ ” လို့ ပြောကြား သွားခဲ့ပါတယ် ။
Previous Article ပွဲစဉ် ၁ မှာတင် ဂယက်ရိုက်တဲ့ အာဖရိကဖလား ၊ ကြားရက်ပွဲရလဒ်တွေ ၊ အပြောင်းအရွှေ့ အကြောင်းတွေနဲ့ . . . နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
Next Article “ဘယ်အသင်းကို မဆို ယှဉ်လို့ရပါတယ်” “ဒီပွဲက ခြေညီတဲ့ ပွဲတပွဲပါပဲ” ဆော်ဒီမြေပေါ်က El Clasico ပွဲအပြီး ရီးရဲ နဲ့ ဘာဆာ နည်းပြ တို့ရဲ့ ပြောစကားများ